Manam-pahaizana: Ny HR dia afaka mamaha ny maha-izy azy ny fizahantany any Karaiba
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manam-pahaizana: Ny HR dia afaka mamaha ny maha-izy azy ny fizahantany any Karaiba
Marika iraisam-pirenena mpizahatany any Karaiba mpifaninana sy indostrialy matanjaka kokoa no miandry raha ny herin'ny fitantanana ny olombelona no ampiasaina hanatsarana ny marika. Izany no hafatra manan-danja holazain'i Ron Johnson, talen'ny fitantanana Blueprint Creative, Barbados, mandritra ny Fihaonambe fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany faha-9 an'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) any amin'ny Nosy Cayman manomboka ny 28-30 Novambra, 2018. Ny fihaonambe dia hatao eo ambanin'ny lohahevitra 'Fananganana mpiasa mpiaro fizahan-tany Karaiba maharitra, mahomby sy maharitra ary maharitra amin'ny fifaninanana eran-tany'.
Johnson dia hanolotra masterclass amin'ny 'Branding and HR Sitting in a Tree' ny zoma 30 novambra.
"Ny fanaovana fomba fiasa izay manomboka eo amin'ny orinasa - fa tsy ny any ivelany - ary ny fiarahan'ny marika sy ny ekipanao HR miara-miasa akaiky kokoa, dia manararaotra ireo mpiaramiasa fizahan-tany Karaiba hanangana marika matanjaka sy orinasa matanjaka kokoa, izay mety hitarika any Karaiba ny fizahan-tany dia mifaninana kokoa amin'ny sehatra manerantany, "hoy i Johnson.
Johnson sy ny ekipan'ny manam-pahaizana momba ny marika ao amin'ny Blueprint Create dia miara-miasa amin'ny lehiben'ny mpitantana, ny ekipa marketing ary ny sampan-draharaha misahana ny zon'olombelona hanampy amin'ny famahana ny olan'ny orinasa mifandraika amin'ny marika. Nanoro hevitra ireo mpanjifa amin'ny indostria maro izy, toy ny angovo, banky, fiantohana, fivarotana enta-mavesatra, fitantanam-bola ary fiarovana. Amin'ity fihaonambe ity dia hiara-hiasa amin'ireo mpanabe, mpampiofana, mpitantana sy mpanolo-tsaina ny mpiasa ary mpianatra, mpianatra, mpitsangatsangana fizahan-tany any Karaiba, mpanao politika, masoivoho fampandrosoana ny fizahantany ary akademisiana izy.
Nilaza ny manam-pahaizana manokana momba ny marika, izay mamaritra ireo matihanina HR ho 'maherifo marika amin'ny mody miafina', fa zava-dehibe ny hampitana ny hafatra amin'ny ambaratonga makro sy micro.
"Ny tombony azo amin'ny fizahan-tany dia ny fahafahan'ny fikambanana tsirairay amin'ny indostria manangana marika matanjaka sy orinasa matanjaka kokoa; ary miaraka, ny fahaizana manangana indostria matanjaka kokoa ary afaka mifaninana am-pahombiazana kokoa eo amin'ny tsena manerantany, "hoy i Johnson.
Nampitandrina izy fa ny vokatry ny tsy fanarahana ny hafatra dia mety hidika ao ambadiky ny sisa amin'ny tontolo any amin'ny faritra toy ny marika, loharanon'olombelona, ​​ny traikefan'ny mpanjifa ary ny fifaninanana ankapobeny.
Ao amin'ny kilasy masterclass amin'ny kaonferansa dia hanazava i Johnson ny antony tsy maintsy hanombohana ny marika.
"Na ny fampielezan-kevitra amin'ny paikady faran'izay hendry indrindra aza dia azo esorina amin'ireo mpiasa misaraka amin'ny asa aman-draharaha", hoy i Johnson. “Tian'ireo orinasa ho tian'ny mpanjifa ny marika anaovany izany, saingy tsy hitranga izany raha tsy tian'ny mpiasan'izy ireo ilay marika aloha. Mety hampidi-doza tokoa ny manandrana manangana marika matanjaka ho an'ny mpanjifa ny orinasa rehefa manana marika malemy atrehin'ny mpiasa izy ireo. ”
Ity dia iray amin'ireo masterclass roa amin'ny fandaharan'asa mandritra ny telo andro amin'ity taona ity, ary ny iray mifantoka amin'ny famahana ny fahafahan'ny mpiasa sy ny fanamafisana ny zava-bita manerana ny toeram-piasana amin'ny alàlan'ny fomba fanao mahery.
Ny Fihaonamben'ny Human Resources Human Resources faha-9 an'ny CTO dia mikendry ny hanome sehatra fihaonambe mampientam-po sy fanabeazana ho an'ireo matihanina momba ny zon'olombelona hahazoana fahalalana vaovao sy hahazoana ny fahaiza-manao ilaina hanampiana azy ireo hahatratra fahombiazana tsara amin'ny fikambanan'izy ireo. Izy io koa dia miresaka momba ireo olana mifandraika amin'ny fiatraikany, ary mifandraika amin'ny singa maha-olombelona ny fizahan-tany ao amin'ny faritra; mampiharihary ireo mpanao asa-tanana ho an'ny fanao fizahan-tany tsara amin'ny tontolon'ny fizahan-tany, ary manome fotoana ahafahana manao tambajotra matihanina.
Ny fihaonambe dia notohanan'ny Departemantan'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any Cayman Islands, ny fikambanana manerantany misy ny Nosy Cayman izay manana portfolio, orinasa, trano fandraisam-bahiny, fivarotana, fialamboly, famatsiam-bola ary biotech.
"Mino izahay fa ity fihaonambe ity dia hanampy amin'ny famelomana indray ireo matihanina momba ny fizahan-tany Karaiba HR, mitaona azy ireo hifantoka amin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny olona izay manohana mpiasa miasa mirindra sy mahavita asa tsara," hoy i Juliet Du Feu, filoha lefitra zokin'olombelona an'ny Dart momba ny olombelona.
MCE Eoropa atsimo 2018 dia namirapiratra nanerana an'i Tesalonika, Gresy